Kiraro mahazatra, kiraro Sprot, kiraro mihazakazaka - Jianer
Jinjiang Jianer Shoes & Garments Co., Ltd. dia fitambarana endrika, fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ho iray amin'ireo orinasa maoderina. Manana traikefa 15 taona amin'ny faritra kiraro izahay. Ny orinasanay dia mandrakotra mihoatra ny 8000 metatra toradroa sy ny tsipika famokarana 4 ary ny tsipika famokarana automatique 1.Mahafaka mandamina baiko sy entana entana ho an'ny mpanjifa, ary manome serivisy avo lenta, vidiny ambany ary avo lenta. Ny fitantanana hentitra sy ny mpanjifa aloha no tanjon'ny orinasan'ny orinasa eto aminay.
2021 New Style Kalitao mafana mivarotra Unisex ...
Ny kiraro fanatanjahan-tena azo itokisana, vehivavy malaza kiraro ...
OEM ODM Custom Winter Climbing Trekking Boots T ...
Modely maodely Custom Sneaker Baloncesto Schuhe ...
Designer avo lenta Anti Slip plush kiraro Ank ...
New Style Custom Vehivavy Fanatanjahan-tena Akanjo Fashi ...
New Style Original Custom Logo Anti Slip Zapati ...
Fomba vaovao manjaitra Zapatil afaka miady amin'ny aina ...
Fahatongavan'olon-droa Zapatillas vaovao azo sintonina ...
Sneakers mitaingina tendrombohitra avo indrindra amin'ny ririnina ...
China Wholesale Oem / Odm Mandehandeha Lehilahy Vehivavy Fashi ...
China mpamatsy lehilahy Lady mahazo aina Jogging Fla ...
mianatra momba anay
Toerana maro any Shina no mametra ny herinaratra, h ...
DONGGUAN, Sina - Ny fanapahana herinaratra ary na ny fahatapahan-jiro aza dia nanemotra na nanidy orinasa maro manerana an'i Shina tato anatin'ny andro vitsivitsy, ary nampitahotra fandrahonana vaovao ho an'ny firenena mihisatra ary mety hisolelaka ...
Ny lalao nasionalin'ny vahoaka faha-14 ...
Tamin'ny 27 septambra, nifarana tamim-pahombiazana ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Nanomboka ny lanonana famaranana ny National faha-14 an'ny kianja Olaimpika Xi'an Stadium ...
Ento anao hianatra Ny lalao nasionaly faha-14 ...
Ny 15 septambra 2021 dia nisokatra ny lalao nasionaly faha-14 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina ao amin'ny Faritanin'i Shaanxi, Sina. Ny lalao nasionaly faha-1 an'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina dia notontosaina i ...
Fampisehoana teknolojia vaovao
Rehefa nanolotra teknolojia vaovao sy fitaovana vaovao ny orinasa, izay nanatsara ny fahombiazan'ny asa sy ny fahaizan'ny famokarana. Neken'ny ampahany amin'ny ...
Ampidiro ny tsipika famokarana mandeha ho azy
JianEr Shoes Company orinasa mpamokatra kiraro matihanina. Manana traikefa fanaovana kiraro maherin'ny 15 taona isika. Amin'ny volana jolay 2020, mampiditra fitaovana mandeha ho azy maro izahay mba hampihenana ...